Undercover Mode: Kali Linux inosvitsa nyowani Windows 10 theme | Linux Vakapindwa muropa
Pakupera kwemwedzi wapfuura, Anogumbura Security yakakanda Kali Linux 2019.4. Vakanga vativimbisa chimwe chinhu chakakosha uye kuti chimwe chinhu yaive yechina vhezheni yegore ravo rekushandisa system. Yakauya nenhau dzinonakidza kwazvo, senge iyo NetHunter KeX iyo inotibvumidza kumhanya Kali Linux pane desktop kubva kune Android foni. Chimwe chiitiko chakatanhamara chaive icho chavaidaidza Yakavanzika ModeAsi chii ichi chimiro chepasi pevhu? Icho chinongedzo chakanyatsogadzirirwa zvekuti hapana anoziva kuti tiri kushandisa yetsika yekuba Linux kugovera.
Uye anozviita sei? Nenzira yakapusa: kushandura iro rese desktop theme kuti ushandise imwe iyo inotevedzera iyo Windows 10 mufananidzo. Sezvinotarisirwa, kune zvakawanda zvikamu zvisinga fanane nesisitimu yekushandisa yeMicrosoft zvachose, pamwe vanozozvinatsiridza mune ramangwana, asi iro Wallpaper, iro repazasi pani, maikoni edesktop uye bhurawuza zvakangofanana. Zvandinofunga ini pachezvangu kuti zvinofanirwa kuvandudzwa ndeye yekutanga menyu iyo iri kunze kwetune.
Shandisai Undercover Mode kubva ku «Vamwe» menyu
Kugonesa iyo Yakavanzika nzira yeKali Linux 2019.4 iri nyore kwazvo. Hapana chikonzero chekupenga uchitarisa kuburikidza neazvino marongero uye nekuchinja zvese nemaoko. Chaunofanira kuita kuenda «Vamwe» menyu (vamwe) uye sarudza "Kali Undercover Mode". Panguva ino ndinofanira kutaura kuti ndakamboiyedza mumuchina chaiwo muChirungu uye kuti muchiSpanish inogona kuoneka riine rimwe zita (unofanirwa kuisa system kuti ukwanise kushandura mutauro).
Kana iko kubaya kwaitwa, shanduko ichave iri pakarepo, ichifambisa iyo pani kuenda pasi, ichiwedzera iyo Windows logo muKutanga, ichichinja kumashure uye zvidhori zvedesktop uye tray system. Zvakawanda zvinofanirwa kugadziriswa kuti uone kuti hatisi mukati Windows 10.
Vashandisi vanofarira vanogona kurodha yazvino vhezheni yeKali Linux kubva Iyi link nenzvimbo dzemifananidzo MATE, GNOME, KDE, LXDE uye ARMhf, kuwedzera kune XFCE izvozvi nekukasira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kali Linux 2019.4 inosvitsa nyowani Windows 10 theme kana iwe uchifanira kuvanza
Andrey Konovalov Akafumura 15 Mamwe Mabhodhi MuLinux Kernel USB Dhirairi